Wadaadadii tabliiqa ahaa oo galabta laagu aasay qabuuraha magaalada Galkaacyo. [Akhris …] – Radio Daljir
Wadaadadii tabliiqa ahaa oo galabta laagu aasay qabuuraha magaalada Galkaacyo. [Akhris …]
Agoosto 12, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 12 – Waxaa galabta lagu aasay qabuuraha magaalada Galkacyo 5 wadaad oo ahaa tabliiq fidiya diinta islaamka, kuwaasi oo saakay salaaddii subax ka hor dabley hubaysani ay ku dileen masaajid ay ku tukanayeen oo ku yaalla xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo.
Boqolaal qof oo iskugu jiray bulashada qaybaheeda kala duwan ayaa ka soo qayb aaska marxuumiinta kuwaasi oo dhammaantood ay ka muuqanaysay carro iyo murugo xooggan oo ay uga tiiraanyeysan-yiin dhacadadaasi aad u naxdinta badan ee lagu laayey wadaadada tabliiqa ah.
Salaaddii jinaasada ayaa lagu tukaday mayka shantaasi nin, waxaana halkaasi laga soo jeediyey khudbado duco ah oo illaah looga baraayey in uu u naxariisto culimadaasi, oo la tilmaamay in ay ahaayeen kuwo aan waxba galabsan.
Khudbadihii halkaasi laga akhriyey oo u badnaa ducooyin, ayaa loogu tacsiyey dhammaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen iyo waliba dawladda iyo shacabka reer Pikistaan oo ay wadadadaasi dhammaantood ka soo jeedeen.
Qubbuuraha uu ka dhacay aaska wadaadadaasi waxaa ka soo xaadiray mas?uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka amniga, C/laahi Sidiid Samatar, wasiirka Caddaaalada iyo diinta C/risaaq Yaasiin Cadulle ?Geesood?, wasiirka caafimaad Dr. Bashiir Cali Biixi, wasiiru dawlaha maamulk wanaagga Maxamed Faarax Gaashaan, wasiirro kuxigeeno, xildhibaano iyo mas?uuliyiin kala oo ka tirsan dawladda Puntland.
Wasiiru dawlaha maamulka wanaagga Puntland Maxamed Faarax Gaashaan, oo saxaafadda kula hadlay halkii lagu aasayey wadaadada tabliiqa ah, ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin dhacdadaasi dhammaanna ummadda muslima ahi ay ka wada xunyihiin.
Md.Gaashaan, waxaa uu carabka ku adkeeyey dawladda Pakistan in ay iyana la wadaagaan tiiraanyada iyo murugada ku aaddan muwaadiniintooda lagu laayey xaaladda Wadajir ee magaalada Galkacyo, ayna mar uun cadaaladda hor imaan doonaan ragga falkaasi ka danbeeyey, wuxuuna si gaar ah u tilmaamay meesha falkaasi ka dhacay in aysan hoos imaan maamulka Puntland.
Goobta aasku ka dhacayey waxaa iyana yimid saddexdii nin ee Pakistaaniyiinta ahaa ee ka bad-baaday weerarkii saakay, kuwaasi oo diiday saxaafadda wax hadal ah in ay siiyaan amaba sawirro laga qaado.
Weerarka wadaadadaasi lagu laayey oo ka dhacay xaafadda Wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada, ayaa waxaa fuliyey koox dabley ah oo aan illaa iyo haatan si rasmi ah loo aqoonsan, laakiin waxaa la rumaysan-yahay in ay ka yimaadeen isla dhanka xaafadda Wadajira oo markii danbana ay u baxsadeen halkaasi oo uu ka arrimiyo maamulka Gal-Mudug.
Barlamaanka Puntland oo baaq nabadeed u diray beelo dhawaan ku dagaalmay gobolka Bari. [Akhris …]